डा. दिव्याको क्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीकाे विश्वास: ‘क्याबिनेट’ डाक्टरदेखि डिनसम्मकाे यात्रा – Health Post Nepal
२०७७ असार ५ गते १०:४३
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को जेठ २२ देखि रिक्त डिन पदमा प्राध्यापक डा. दिव्या सिंह शाहलाई नियुक्ति गरेको छ।
डा. सिंहको नियुक्तिलगत्तै वरिष्ठताकै आधारमा डिन नियुक्तिको माग राख्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) संस्थान डिनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै सुरु गरेको छ।
त्रिवि प्रगतिशील कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन पनि वरिष्ठताको आधार भत्काएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जबकि यसअघिका प्राध्यापक बढुवालाई नै वरिष्ठताको आधार बनाएर नियुक्ति हुँदा पनि फरक खालका ब्यानर र नाममा आन्दोलन हुन्थ्यो।
नियुक्तिको विधि र प्रक्रियापछि प्रश्न उठाएर गरिने आन्दोलन सामान्य भए पनि आइओएमका डिन, सहायक डिन र निर्देशकहरू नियुक्तिमा अनुकूलका मान्छे ल्याउन त्रिवि पदाधिकारीले गर्ने प्रयास र व्याख्यामा विरोधाभाष देखिने गरेको छ। त्यही कारणले पनि नियुक्तिमा विरोध नियमितता जस्तै बनेको छ।
आइओएम पदाधिकारी नियुक्तिलाई व्यवस्थित डा. केसीको अनशनबाहेक पनि विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, पटक पटक बनेका मापदण्ड र चिकित्सक शिक्षा ऐनमा समेत व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी नियुक्तमा बहस जारी छ।
वर्षौंदेखि त्रिविमा पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुख, डिनदेखि विभागीय प्रमुखसम्म दलको भागबण्डामा नियुक्त हुने यथार्थता छ। तर, आइओएमका सन्दर्भमा यसलाई तोड्न डा. गोविन्द केसीले २०६७ सालदेखि अभियान थालेसँगै कम्तीमा नियुक्तिमा सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ।
यसपटकको डिन नियुक्ती पूर्ण रुपमा क्षमता मात्रैको आधारमा मात्रै मिलेको होइन् । यसमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको छ । त्यसमा पनि मुख्य फ्याक्टर प्रधानमन्त्रीसँगको उनको सम्बन्ध हो ।
भागबण्डामा आएका तत्कालीन पदाधिकारीबीच प्रश्नपत्र किनबेच आरोपपछि उत्पन्न विवादले आइओएम १९ दिन बन्द भयो। त्यो अप्रिय घटनाको जगमा डा. केसीको अभियान बढ्दै गयो।
डा. केसीले अन्य मापदण्ड नबन्दासम्म प्राज्ञिक संस्था भएका कारण प्राध्यापक नियुक्त आधार नै वरिष्ठताको आधार हुनुपर्ने सवाल उठाए। तर न डिन, सहायक डिन होस् या क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बन्यो, न त वरिष्ठताको पुरानो आधारले निरन्तरता पायो।
यद्यपि आइओएमका सन्दर्भमा विश्वविद्यालय र सरकार नेतृत्वले परिस्थिति र व्यक्ति फेरिँदा वरिष्ठताको व्याख्या बदल्ने परिपाटी बसालेका छन्। वरिष्ठतालाई मात्रै आधार मान्दा अवकाश नजिक भएका, नेतृत्व क्षमतामा कमजोर व्यक्तिसमेत जिम्मेवारी पाउने गरेको भन्दै यसपटक युवापुस्ताका चिकित्सकहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए।
नवनियुक्त डिन डा. दिव्या सिंहको नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि त्रिवि उपकुलपतिलगायत सर्च कमिटीका सदस्य र विभागीय प्रमुखसमेत कम्तीमा पूर्ण कार्यकाल खाने व्यक्तिको पक्षमा थिए। ती लगायतका आधार खोज्दा डा. सिंह परेको सर्च कमिटीको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार सर्च कमिटी कम्तीमा ४ वर्षे कार्यकाल भएको, प्राध्यापक भएको ५ वर्ष पूरा गरेको, संस्था हाँक्ने भिजनसहित अन्य अनुभवको मापदण्ड तय गरी सुरुमा १४ जनाको सूची तय गरेको थियो। तीमध्ये ४ जनाले मात्रै डिन बन्न इच्छा देखाएका र तीमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस भएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
पूर्ण कार्यकाल भएकाको सूची बनाउँदा डा. सिंह वरिष्ठतम्मै पर्ने उनीहरूको दाबी छ।
डा. सिंहले पनि आफूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले प्राध्यापकमा बढुवा गर्दा ढिलाइ गरिएको भन्दै वरिष्ठता आधारमा पनि आफू पछाडि नरहेको दाबी गरेकी छन्।आइओएमजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको डिनका लागि डा. दिव्याको क्षमतामा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन् ।
तर, यसपटकको डिन नियुक्ती पूर्ण रुपमा क्षमता मात्रैको आधारमा मात्रै मिलेको होइन् । यसमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको छ । त्यसमा पनि मुख्य फ्याक्टर प्रधानमन्त्रीसँगको उनको समम्बन्ध नै हो ।
त्रिविले आइओएम डिन सिफारिसका लागि जेठ २३ मा गठन गरेको सर्च कमिटीका एक सदस्य डा. जीवन शेरचनले छोटो छोटो समयमा डिन परिवर्तन हुँदा संस्थामा अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै उम्मेदवार छान्दा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनेलाई सिफारिस गरिएको दाबी गरे।
त्यसबाहेक सर्च कमिटीले सिफारिसअघि राखेको विभागीय प्रमुखको बैठकमा समेत उनले चारवर्षे कार्यकाल, प्राध्यापक भएको कम्तीमा ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, आइओएमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनमा पहुँच भएको र महिलालाई प्राथमिकताजस्ता आधारमै डा. सिंह सिफारिसमा परेको उनले बताए।
‘धेरै वरिष्ठ साथीहरूको त डिन बन्ने चाहना पनि देखिएन,’ सदस्य डा. शेरचनले भने, ‘उत्तिकै योग्यता देखिएकाबीच हेर्दा पहिलो महिला डिन हुने अवस्था बन्नु सकारात्मक नै हो।’
यसअघिका अधिकांश डिन नियुक्तिका आधार केलाउँदा भने डा. सिंह प्राध्यापक बढुवा भएको आधारमा ३२ औं नम्बरमा पर्छिन्। तर, अहिले सिफारिस र नियुक्तिका आधारमा डा. सिंह वरिष्ठतम् तीन मध्येमा पर्ने दाबी सर्च कमिटीका सदस्यहरूको छ।
आइओएमकै केही चिकित्सकको बुझाइ भने पूर्र्ण वरिष्ठम् भनेर खोज्दा त्रिविकै उपकुलपति बनिसकेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा पनि २२ औं नम्बरमा छन्।
अधिकांश नियुक्तिमा प्राध्यापक भएको आधारलाई वरिष्ठता मान्नुपर्ने अडान राख्दै आएका डा. केसीसमेत आइओएमभित्रकै केही नियुक्तिका आधार मान्दासमेत मौन बस्ने गरेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
डिन नियुक्तिमा माथिल्लो तहमा पहुँच, महिला भएको, कम्तीमा ४ वर्षको कार्यकालै हुनैपर्ने व्यवस्थाजस्ता मापदण्डले डा. सिंहलाई साथ दिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। तीबाहेक राजनीतिक रूपमा खासै नखुलेका र नयाँ पुस्ताका चिकित्सकको समर्थन पनि डा. दिव्याको पक्षमै थियो।
डा. सिंहको नियुक्तिसँग यसअघि अस्पताल निर्देशकमा डा. भगवान कोइराला, डा. दीपकप्रकाश महरालगायतका नियुक्तिमा वरिष्ठता विवाद उत्पन्न हुँदा डा. केसी कडा अडान नलिएका थिए।
दार्चुलाबाट डढेल्धुरा आइपुगेका डा. केसीले टेलिफोनमा बरिष्ठता भत्काइएको प्रत्रि आक्रोश जनाए । ‘यी भ्रष्ट नेताले संस्थामा थिती बस्न नै दिएनन्, अब मेरो लडाई ओली र प्रचण्डविरुद्ध नै हुन्छ’
डा.केसीले डा. दिव्या योग्य महिला, भ्रष्ट चरित्रको नभएपनि पदमा लोभिएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ जस्तो मान्छे बरिष्ठताबाट आएको भए राम्रो हुन्थ्र्यो’ उनले भने, ‘हाम्रो अभियानमा साथ दिएको मान्छेले अवसर आउँदा पनि बरिष्ठलाई नै बनाउँनुस् भन्नुपर्थ्र्यो’
यद्यपि डा. केसीको वरिष्ठता भनेको वरिष्ठतम् नै हो भन्ने अडानका आधारमा कार्यकाल तीन महिना बाँकी भएकादेखि औसत एक/डेढ वर्ष अवकाश हुन बाँकी अवधि रहेका चिकित्सकले समेत डिन बन्ने अवसर पाएका थिए।
डा. केसीको वरिष्ठता अभियानपछि डा. कुमुद काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, डा. राकेशकुमार श्रीवास्तव र डा. जगदीश अग्रवाल डिन नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठता मिचेर नभएका नाममा डा. केसीले अनशन गरेकै कारण डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, डा. शशी शर्मा, डा. केपी सिंहले डिन बने पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन्।
डा. सिंहको विरोध र समर्थन
नवनियुक्त डिन डा. दिव्या सिंह शाह आइओएमभित्र वरिष्ठभित्र परे पनि उनको नियुक्तिको आधार त्योबाहेक पनि छ। नेकपा निकटकै चिकित्सकहरूको संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघले डा. दिनेश काफ्लेलाई डिन बनाउन लविङ र दबाबसमेत सिर्जना गरेको थियो। तर, डा. सिंहको इच्छामा उनको प्राज्ञिक र क्लिनिकल पृष्ठभूमि सहायक बन्यो।
त्रिवि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीकै सिफारिसअनुसार नियुक्त गराउन सक्थे। तर, सो सिफारिस पन्छाउनुको पछाडि डा. सिंहसँगको निकटताले काम गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष हुने समयमै फंगल्स इन्फेक्सन भएदेखि नै ओलीको उपचारमा सरिक मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. सिंहको प्रधानमन्त्रीसँग विशेष सम्बन्ध हुनु स्वभाविक हो।
आगामी दिनमा सहायक डिन, अस्पताल निर्देशकलगायतका नियुक्तिमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता हेरेर नल्याउने र योग्यमान्छे ल्याउने अडानका कारण पनि डा. दिव्याको पक्षमा आन्तरिक माहोल बनेको छ।
तर, डा. सिंह क्याबिनेट फिजिसियनसहित थुपै पदमा रहेकाले डिन बन्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नेकपाकै चिकित्सकहरू थिए। तर, डा. सिंहको इच्छा र प्रधानमन्त्रीको समर्थनका अगाडि कसैको जोड चलेन।
नेपालमा अहिले पाएका पदसँगै विषय विज्ञता र नेपालमा मिर्गौलाको पहिलो सफल प्रत्यारोपणको जसले यो पटक डा. सिंह नेतृत्वका लागि योग्य देखाउन काम गर्यो।
त्रिविभित्र पनि लामो समयदेखि विभागीय प्रमुखसहित नेपालमा अंगप्रत्यारोपणसम्बन्धी समितिको संयोजक, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्यलगायतका पदको जिम्मेवारीले उनीमाथि एउटै मान्छेले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
तीबाहेक डा. सिंहसँग सार्क र एसियास्तरीय नेफ्रोलोजिस्टहरूको सोसाइटीकै नेतृत्व अनुभव पनि छ।
सर्च कमिटी गठनदेखि मापदण्ड निर्धारण गर्दा नै डा. सिंहलाई सिफारिसमा पार्नेगरी गरिएको आरोप नियुक्तिका विपक्षमा उभिएको छ।
यसपटक नेकपाको सत्ता हुनु र आइओएममा वरिष्ठमध्येका प्राध्यापकमा नेकपाको बलियो उम्मेदवार नहुनुले पनि दिव्याको पल्लाभारी भएको थियो। ‘धेरै चिकित्सक कांग्रेसनिकटका छन्, प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेका डाक्टरलाई डिन बनाउने सम्भावना थिएन, त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको कार्यकर्ता डिन आउनुभन्दा बरु राजनीतिक रूपमा नखुलेकै मान्छे आओस् भन्ने चाहनाले पनि दिव्यालाई धेरैको साथ रह्यो,’ आइओएमका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने।
ती चिकित्सकका अनुसार आगामी दिनमा सहायक डिन, अस्पताल निर्देशकलगायतका नियुक्तिमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता हेरेर नल्याउने र योग्यमान्छे ल्याउने अडानका कारण पनि डा. दिव्याको पक्षमा आन्तरिक माहोल बनेको छ।
अहिले नेकपानिकटका चिकित्सकहरू भने तत्काल रिक्त हुन लागेको निर्देशक र सहायक डिनलगायतका पदमा भागभण्डा लागि डा. सिंहमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा छन्।
को–को थिए दाबेदार ?
यसबीचमा डिनमात्रै होइन, केही समयमै अवकाश पाउँदै गरेका डा. प्रेम खड्का, सहायक डिनहरू र क्याम्पस प्रमुखलगायतका नियुक्तिमा समेत पूर्ण वरिष्ठता नै आधार भएको थियो।
आगामी डिन पनि सोही आधारमा नियुक्त हुने अवस्था बन्दा डा. वाइपी सिंह, डा. सुशील कृष्ण शिल्पकार र डा. प्रदीप वैद्यलाई तेस्रो नम्बरमा हेरिएको थियो।
डिनकै रूपमा हेरिएका डा. भगवान कोइराला र डा. ईश्वर लोहनीले पछिल्लो पटक दाबेदारी छाडेको सर्च कमिटीकै एक सदस्यले बताए। डा. कोइरालाले आफू काउन्सिलको अध्यक्ष रहेको र बाल अस्पताल बनाउने अभियानसमेत रहेको भन्दै पछाडि हटेका थिए।
सर्च कमिटीले बनाएको मापदण्डका आधारमा डा. प्रदीप वैद्य, डा. शिल्पकार, डा. दिव्या सिंह र डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ मात्रै अन्तिम चारमा परेका थिए। तीमध्ये डा. शिल्पकारको विभागीय प्रमुखबाहेक अन्य प्रशासनिक अनुभव नदेखिएका कारण तीनजना सिफारिसमा परेका थिए।
तीबाहेक डिन हुने आकांक्षीको सूचीमा भने पूर्व निर्देशक डा. दीपकप्रकाश महरा, डा. रोहितकुमार पोखरेल, डा. बालमुकुन्द रेग्मी, डा. राजेन्द्र गुरागाईं, डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि थिए।
डा. सिंह नियुक्त भइसकेको सन्दर्भमा अब आगामी पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डाका लागि दबाबका कार्यक्रम हुनसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।